SPYV002 - OMG Mini Pocket Pen Digital Voice Recorder, 8GB fandraisam-peo, 10 ora fandraisam-peo, - OMG Solutions
Fampidiran-dresaka, famoahana: atsangano ny fiantombohan'ny herinaratra mankany amin'ny toerana ON ary ny herinaratra dia manitsy ary manomboka ny fandraisam-peo automatique. Nandritra ny fitanana an-tsoratra dia mbola mitohy ny mari-pamantarana fanoratana.
Manapaka, afa-tsy: hampidio ny fiantohana herinaratra mankany amin'ny toerana OFF ary ny fitaovana dia hamonjy ny rakitra fanoratana sy ny herinaratra.
Fanondroana ny bateria: mandritra ny fitanana an-tsoratra, ny mari-pamantarana an-tsoratra dia afaka mitifitra mba hampisehoana fa ambany ny hery. Atero azafady ny bateria amin'ny fotoana.
Fampahatsiahivana fiampangana: mandritra ny famandrihana dia mijanona hatrany ny tondro; rehefa feno tanteraka ny bateria dia mijanona hatrany ny mari-pamantarana.
Haingam-panoratra: 2.5 MB / segondra; Vakio ny hafainganam-pandeha 8 MB / segondra
Battery: 100 mA-3.7V bateria lithium azo havaozina
Life Battery: 10 Hours
Charge Time: 1-2 ora
Fahatsiarovana: 8 GB
Tehirizo firaketana: 240 ora
Storage media: fahatsiarovana tselatra natsofoka
Temperature miasa: 0-40
Size: 148 * 14mm
Weight: 22 h
6146 Total Views 3 Views Today